gaabinta : UCBL
Ardayda (qiyaastii.) : 35000
Ha iloobin in aad discuss Claude Bernard University Lyon 1
Claude Bernard Lyon 1 waa jaamacad oo bixiya waxbarashada 40,000 ardayda sano ah ee xarumaha sayniska iyo farsamada, caafimaadka iyo isboortiga. Claude Bernard Lyon 1 is part of Université de Lyon, goobta ugu muhiimsan University French ka baxsan gobolka Paris ee.
Iyadoo la aasaasay a sumcad caqliga xoog labadaba France iyo dunida oo dhan, Claude Bernard Lyon 1 Jaamacadda waxaa had iyo riixaya xuduudaha aqoonta,kor u qaadida waxbarashada iyada oo loo marayo cilmi iyo si joogto ah dhiiri wada hadal u dhexeeya sayniska iyo bulshada.
Claude Bernard Lyon 1 waa University ah nolosha si buuxda nool. xarumood Its, oo ku yaalla wadnaha gobol aad u fiican, waa meelo noole la badan oo hawlaha, awood ardeyda si ay u horumariyaan iyo gaaro dareen ah fulinta shakhsi. University Lyon The 1 waxaa ku taal 13 goobaha kala duwan ee afar ka mid ah xarumaha maamulaha of dhaqdhaqaaq ah gobolka Rhône-Alpes of France : magaalooyinka dalka Lyon, Saint-Etienne iyo Bourg-en-Bresse iyo magaalada Roanne. Jaamacadda ayaa inta badan ka tarta horumarinta gobolka this iyada oo loo marayo iskaashiga ay la leedahay shirkadaha maxalliga ah iyo kuwa wadaniga ah iyo Maamulka Gobolka.
Lyon 1 shaqeeya 2900 macalinka / cilmi iyo macalimiinta, kuwaas oo 700 sidoo kale dhakhaatiirta cusbitaalka iyo sidoo kale shaqaalaha farsamo iyo maamul ee 1800. Lyon 1 noqday aasaaska madaxbannaan 1dii January 2009 iyo miisaaniyad guud ee 405 m € Lyon 1 waa mid ka mid ah loo-shaqeeyeyaasha ugu weyn ee gobolka.
jaamacadda A dhawayn, waxbarashada oo u dhigma baahida bulshada ee
ardayda Lyon 1 waa ku dhowaad 40.000. 54% dadka tani waa dumar iyo 18% hesho deeqda ardayga. Lyon 1 sidoo kale waxa uu ku faanaa in ay tiriyaan tiro badan oo ardayda ajinebiga ah (10,5% ardayda, of 134 jinsiyadaha).
Ku dhowaad 80% ardayda dooran barnaamijyada xirfadaha : Lyon 1 soo saarta oo aan ka yarayn 9250 qalin sanadkiiba.
barnaamijyada waxbarasho The on dalab ee kulliyadaha sayniska caafimaadka siin helitaanka gabi ahaanna ka mid ah xirfadaha caafimaadka (dhakhtarka daawada, farmashiistaha, ilkaha, umulisada) iyo xirfadaha paramedical (audioprosthesist, ergotherapist, jimicsiga, hadalka therapist, orthoptist, jimicsiga takhasusay isdhexgalka psychomotor).
qaybta sayniska Lyon 1 ayaa sidoo kale bixisaa doorasho ballaaran ee maaddooyinka: shahaadada DUT ku bixisaa tababarka ee 17 meelaha aqooneed ee tababarayaasha farsamo mustaqbalka. 57 degrees bachelor xirfadeed ee ardayda loogu diyaariyo shaqooyinka maamulka dhexe. 111 degrees sayidkiisa (xirfadeed, reasearch ama xirfadeed la xoojiyey iyo reasearch) ardayda loogu diyaariyo shaqooyinka ka tirsan maamulka ama shaqada ee cilmi-baarista iyo horumarinta. Lyon 1 sidoo kale waxay bixisaa heer aad u sarreeya oo tababar xirfadeed oo khaas ah ee injineernimada (Polytech Lyon) iyo sayniska actuarial (Isfara).
L'ESPE, aasaaska tababarka macalinka gaarka ah ee diyaarinta xirfadaha macalimiinta hoose iyo sare (ee maaddooyinka oo dhan).
Lyon 1 abaalmarinta 300 doctorates sano ah in ay ardayda ka soo baxa waxbarashada ay resarch, sameeyay in laboratories ee jaamacadda, iyagoo la kaashanaya warshadaha wehelkaaga ama goobaha kale ee waxbarasho.
Sidoo kale bixinta ah barnaamijka waxbarashada undergraduate hore ballaaran, Lyon 1 oo uu weheliyo, ardayda madax banaan ama shirkad taageeray in sii tababarka horumarinta xirfadeed.
dhiirigelin The firfircoon ee hal-abuurnimo
Lyon 1 waa jaamacad maaddooyin ku takhasustay labada asaasiga ah iyo codsatay cilmi-baarista iyo sida u ku faani karto in ka badan 4415 articles caalamka daabacay iyo 44 shatiyada sanadkiiba. Jaamacadda waxay leedahay 68 unugyada cilmi-baarista gobolka maal-shaqeeya saddex beeraha; caafimaadka, deegaanka iyo waxyaabaha la teknoolajiyada. Tiro qaar ka mid ah unugyada kuwanu waa natiijada ururka dhowr laboratories galay kooxahaasi cilmi. Tani waxay awood u kuwan dhismeedka wadajir ah u leedahay beer badan guud ee aqoonta iyo helitaanka si ay u, ama iibka ah ee, qalab cilmi qaab ka badan noqon doono suurto gal ah sida dhismayaasha shaqsi.
dhex- warshadaha ganacsatada gaarka ah The University ee, EZUS Lyon1 iyo Lyon Engineering Project (DABINTA) caawin laboratories Lyon 1 ayaa si guul jawaabtaa wicitaanada inay qandaraas ah, waayo, qandaraasyada cilmi qaranka iyo kuwa caalamiga ah.
Qaran iyo caalamka qiray
University waxaa ka go'an in ay ka badan 80 mashaariicda Midowga Yurub iyo qayb firfircoon ee Barnaamijka Framework todobaad ee Horumarinta Cilmi-baarista iyo tignoolojiga (FP7).
Xaaladda caalamiga ah ee Lyon 1 sida xarun of heer sare cilmi ah ayaa dhawaan la soo bandhigay:
by taageero dhaqaale si University ee laga siiyay by Hay'adda Qaranka ee Research,
by qaybgalka University ee Network mawduucyada ee Research Advanced yeedhay Innovations daweynta iyo Infectiology,
iyo sidoo kale Xarumaha mawduucyada ee Cilmi-baarista iyo Healthcare: Neurocap (neuroscience), Centaure (tallaalidda xubin) iyo Cancer Synergie Lyon
iyo @ Institut CarnotI ee L: gaadiidka iyo qalabka sayniska.
Add to this 6 Kooxaaha cilmi ee beeraha ee cilmiga caafimaadka (Lyonbiopole), nanotechnology (Minalogic), chemistry iyo deegaanka (axelera), plasturgy (Plastipolis), dharka (Techtera), cayaaraha (Sporaltec) iyo gaadiidka dadweynaha (Lyon Urban Truck iyo baska 2015).
Ma rabtaa discuss Claude Bernard University Lyon 1 ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Claude Bernard University Lyon 1 rasmiga ah Facebook
Claude Bernard University Lyon 1 dib u eegista